Kodzero-dzevanhu, 20 Gunyana 2017
Chitatu 20 Gunyana 2017
Gunyana 20, 2017
Chinhoyi Yoita Mutauro Pamusoro peBVR
Vamwe vagari vemuChinhoyi vanoti havasi kufara nenzvimbo yekunyoresa kuvhota iyo yakaiswa kunze kweguta.
Bhanga reMadzimai Riri Kurongwa Rokonzera Mutauro
Sachigaro we MDC-T Women’s Assembly, Amai Linette Karenyi, vanoti zvese zviri kurongwa nehurumende zvekuita bhanga revanhukadzi munyika zvakanangana neavo vanotsigira Zanu-PF chete, kwete veruzhinji rwevanhu vemu Zimbabwe.
America Inotsigira Zvirongwa Zvinosimudzira Vanhu kuTsholotsho
Mumiriri weAmerica muZimbabwe, Ambassador Harry Thomas Junior, vashanyira dunhu reTsholotsho vachiona zvirongwa zviri kutsigirwa nehurumende yavo munzvimbo iyi.
Mhirizhonga paRemembrance House Vanhu Vachida Kunyoresa
Mutauriri weMDC-T, VaObert Gutu, avo vakwanisa kunyoresa neChitatu, vatiwo havasi kufara nechinono chiri kuitwa neZEC kunyoresa vanhu.
Amai Makarau Vobvuma Kuti Chirongwa cheBVR Chine Zvinetswa
Sachigaro wesangano reZimbabwe Electoral Commission, Amai Rita Makarau, vanoti matambudziko ari kusangana nevanhu vari kuvhota vange vakaatarisira sezvo chirongwa chavo chekunyoresa vavhoti chichiri kutanga.
Zvizvarwa zveZimbabwe Zvoenderera Mberi neKuratidzira kuUNGA
VaMugabe vari kutarisirwa kutaura nemusi weChina masikati pamusangano uyu
Gunyana 19, 2017
VaTrump Vanoshora North Korea ne Iran kuMusangano weUNGA
Mutungamiri we America, Va Donald Trump, nemusi weChipiri vakataura kumubatanidzwa wenyika dzepasi pose we United Nations General Assembly vachishora zvikuru nyika dze Iran, Afghanistan, Venezuela ne North Korea.
Vamwe Vogara Vakabatira Ura Mumaoko kuDzivaresekwa
Mukuru wesangano reHarare Residents Trust, VaPrecious Shumba, vanoti sangano ravo riri kuongorora nyaya iyi.
Nzvimbo yeRujeko Yoshaikwa muBRV kuMasvingo
Mumwe mugari wemuRujeko, VaZivanai Muzorodzi, vanoti vakatadza kunyoresa kuti vazovhotera muwadhi yavo sezvo yakanga isiri kuwanikwa mumishina, vakazopedzisira vanyoresa kuti vavhotere kumusha kwavo kumaruwa.
Sangano reVakarwa Hondo Rorwisa Kumisa Musangano weKushara Hutungamiri Hutsva
Sangano reZimbabwe National Liberation War Veterans Association rinotungamirwa naVaChris Mutsvangwa neMuvhuro rakandesa gurukota revakarwa muhondo yerusununguko, VaTshinga Dube nevamwe.
Gunyana 18, 2017
Chirongwa cheBVR Chinotanga muBulawayo Vanhu Vashoma Vachipinda Machiri
Mukuru anoona nezvesarudzo muBulawayo, Amai Sithembiso Khupe, vabvuma kuti muchina wavo wambovanetsa asi vati vari kufara nemafambiro aita chirongwa pakutanga kunyoreswa kwevanhu.
Kanzuru yeHarare Yomanikidza Vanhu Kubhadhara Zvikwereti
Kanzuru yeHarare inoti vagari vemuguta iri pamwe nemakambani vane chikwereti chinosvika mamirioni mazana manomwe emadhora uye mari iyi iri kuida nekukurumidza sezvo vave kunetseka kuita mabasa anofanira kuitirwa vagari vemuguta iri.